Xisbiyada Kulmiye, UCID, UDUB iyo Komishanka Doorashooyinka oo ka hadlay Xaaladda Buuhoodle | Xarshinonline News
Xisbiyada Kulmiye, UCID, UDUB iyo Komishanka Doorashooyinka oo ka hadlay Xaaladda Buuhoodle
Hargeysa,(NNN)- Saddexda Xisbi Siyaasi iyo Guddida Doorashooyinka Somaliland, ayaa ka hadlay xaaladda gobolada bariga Somaliland, gaar ahaan xaaladda Deegaannada Sool iyo Buuhoodle. Saddexda Xisbi ee KULMIYE, UDUB iyo UCID, ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay xaaladda Gobolka Sool, gaar ahaan Magaalada Laascaanood iyo sidoo kale Deegaanka Buuhoodle oo dhawaan dagaallo ka dhaceen.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa ka hadlay shaqaaqooyin dhawaan ka dhacay Magaalada Buuhoodlle iyo sidoo kale Laascaanood, waxaanu arrintaa ku tilmaamay dayac ka yimi Xukuumadda Madaxweyne Rayaale, isaga oo eedda dagaalkaasna dusha u saaray dad uu sheegay inay dibadaha isaga soo bahaysteen inay dagaal ridaan. “Waanu ka xunnahay dadkaa ku geeriyooday shaqaaqooyinka, maxaa yeelay maanta looma baahna in Dhiig dambe reer Somaliland ama Soomaali oo dhan ka daata.
Dhibaatada halkaa ka taagan, waxaanu dusha ka saaraynaa dadka iska soo urursaday dibadaha ee ka yimi Maraykanka iyo Yurubta kale ee dhulkii maatidu deganayd damacsan inay dab geliyaan, iyagoo og dhibaatada Soomaali ku dhacday, halkii ay 18-ka sanadood burburkii Soomaaliya la burbursanayd Somaliland oo ka nabad gashay, ay ugu faani lahaayeen ee ay nabadgelyada ka adkayn lahaayeen ee ay horumarka ummada ka shaqayn lahaayeen. Dadkaasi lacagtii qaxoontigay soo gurteen oo waxa ummadoodii dabka galiyey qaxa geliyey lacagtaas ayaa kaw ka ah. Ta labaad, waxa canaanta ku leh dawlada Somaliland ee ku guuldaraysatay Buuhoodle oo Burco dusheeda ah inay maamulka gaadhsiiyaan.” Ayuu yidhi Faysal oo ka mid ahaa masuuliyiinta Xisbiyada ee ka hadlay xaaladda bariga dalka, kuwaas oo u waramay Telefishanka UNIVERSAL, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Xaq buu dalku u leeyahay inuu nabadgelyada deegaankiisa la ilaashado wadanka jaarkiisa iyo inaanay meeshaasi noqonin meel ay fawdo ka abuuranto oo aragagixiso ku dhalato oo dhibaato u keena dalkooda.
Ciidamada Somaliland ee tagay xuduudaha, xaq bay u leeyihiin, dalkoodii bay tageen oo dal ajaanib ah may tagin. Waxaananu leenahay dadka deegaanka Laascaanood iyo degmada Buuhoodle, niman Carruurtoodii iyo dadkooda gaystay Dibadaha oo Kenya laga guray oo qaxoonti u ah, yaanay carruurtiina imika naruuradu u bilaabantay, waayo maanta Laascaanood Jaamacad bay leedahay, qofkii qof dila waa loo dilayaa, nabadgelyada weeyaan. Markaa yaanay dhibaatada sharci darrada ah ee xukun-darrada ah ee maamul darrada ah, ee ku waartay Buuhoodle, yaanay idinku soo fatihin baanu leenahay. UCID haddaanu nahay waxaanu diyaar u nahay in dadkaasi waxay tabanayaan oo dhan aanu buuxino inaanu walaalnimadii iyo wada dhalashadii soo celino, inaanu ka fikirno sidii dalkeena aynu u horumarin lahayn, inaynaan wadadii qabiilka ee lagu jabay raacin, inaynu raacno wadadii wanaagsanayd ee illaahay inoo tilmaamay”
← Guddoomiyaha Guurtida oo si qotodheer uga hadlay arrimaha doorashada, baaqna u jeediyey xisbiyada
Beesha reer Shirdoon (Yoonis Nuux) oo Suldaan cusub caleemo-saaray →